धमिराको गोलोमुनि सुनको खानी हुन्छ, बैज्ञानिक तथ्य कत्तिको सत्य ? - HAMRO YATRA
धमिराको गोलोमुनि सुनको खानी हुन्छ, बैज्ञानिक तथ्य कत्तिको सत्य ?
काठमाडौं, पुस । अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानलाई पत्याउने हो भने अब हाम्रा डाँडा पाखातिर धमिराले लगाउने गोलो अर्थात् देवलको मुनि उत्खनन गर्नुपर्ने भएको छ । शोधकर्ताहरुका अनुसार धमिराको गोलो मुनि सुनको खानी हुनसक्छ ।
ड्रिलिंग जस्ता अन्य पारम्परिक तरिकाले भने धमिराको देवलको नमूना संकलन गरी अनुसन्धान गर्दा सुनखानी पत्ता लगाउनु आर्थिक रुपमा बढि मितव्ययी हुने बताइएको छ । यस सम्बन्धी शोध जियोलोजी पत्रिकामा समेत छापिएको छ ।